Nofeembar | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Nofeembar, 2009
Golaha Wasiirada oo cod fartaag ah ku doortay gudoomiyaha maxkamada sare
Nofeembar 29, 2009
Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ogolaaday Mahmoud Omar Farah(Indhobuur) in uu noqdo gudoomiyaha maxkamada sare ee dowlada KMG Somalia kadib ku dhawaad laba sano oo uu booskaasi banaanaa.
Mar Indhabuur oo horay usoo noqday xeer ilaaliyaha qaranka oo uu kasoo noqday dowladii Milatariga iyo wasiirka cadaalada oo uu kasoo noqday dowladii madaxweynihi hore Dr C/qasim ayaa markakan kusoo baxay jagada gudoomiyaha maxkamada sare oo ah jago culus.
Kadib kulan ay maanta isugu yimaadeen madaxtooyada Somalia Golaha Wasiirada ayaa waxaa loogaga dooday magacaabista Gudoomiyaha Maxkamada Sare waxaana aaqirkii ay cod far taag ah ku ogolaadeen dhamaan xubnaha golaha wasiirada mas’uulkan cusub ee hogaanka u qaban doono Maxkamada sare.
Afhayeenka Xukumada Cabdi Xaaji Goobdoon oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Maxamuud Indhabuur uu aqbalay xilka isaga oo intaasi raaciyey in ra’isulwasaaraha uu ugu baaqay in uu howshiisa kasoo baxo.
Sidoo kale kulanka golaha wasiirada ayaa waxaa logaga dooday qodobo ay ka mid ahaayeen habraac lagu sameyn doono dastuur cusub oo ay yeelan doonto dowlada KMG Soomaaliya,iyo sidoo kale sharci ay soo gudbiyeen AMISOM oo ku saabsan difaaca dowlada KMG ah.
Wasiirka Dastuurka iyo Arrimaha Federaalka Madoobe Nuunow Maxamed oo la hadlay warbaahinta kulanka kadib ayaa sheegay in qodobka ku saabsan dastuurka cusub oo ah qodob ay soo gudbiyeen wasiiro uu isagu ku jiray uu yahay qodob muhiim ah,wuxuu kaloo sheegay in dastuurka cusub uu siin doono shacabka dhamaan wixii awood ah.
Booska gudoomiyaha maxkamada sare ayaa waxaa ku fadhiyey Yusuf Cali Haariin laakin waxaa xilka ka qaaday madaxweynihi hore C/llahi Yusuf iyadoo xil ka qaadisti lagu sameeyey Mr Haaruun ay keentay qilaaf xiligaasi soo kala dhexgalay C/llahi Yusuf iyo ra’isulwasaarihiisii Cali Maxamed Geedi.
Kenya oo wixii ciidan ay laheyd banaanka soo dhigatay kadib qabsashadii Shabaab ee Dhoobley
Dowlada Kenya ayaa kordhisay ciidamadeeda jooga xadka ay la wadaagto Soomaaliya maalin kadib markii ay Xarakada Al-Shabab ay la wareegeen magaalada Dhoobley oo u dhow xadka Kenya.
Saraakiisha Amaanka dalka Kenya ayaa tilmaamay in ay adkeeyeen amaanka xuduuda si bay yiraahdeen loogaga hortago kooxaha Islaamiyiinta Soomaaliya oo ku sii siqaya xadka Kenya ay la wadaagto Soomaaliya,waxa kale oo ay sheegeen in ay adkeeyeen amaanka magaalooyinka ku yaala gobolka waqooyi Bari.
“Xuduuda gabi ahaanba waa la xiray laakin dadka wali waxay isku dayayaan in ay galaan si ay isaga diiwaan geliyaan xerooyinka qaxootiga ee ku yaala Kenya”sidaa waxaa sarkaal ka tirsan hey’adaha gargaarka oo jooga magaalada Dhoobley kaasoo u waramay wakaalada wararka ee Rueters.
Arrintan ayaa ka danbeysay kadib markii shalay ay qabsadeen Al-Sshabaab magaalada Dhoobley ee gobolka J/hoose maalmo yar kadib marki ay isaga baxeen Xizbul Islaam.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay in ay ka hortageyso fal kasta oo lagu carqaladeynayo ammaanka iyo jirtaankeeda, waxaana ay cadeysay in aanay gacmaha ka laaban doonin daan daansiga Al-Shabab.
Muqdisho: “ Dagaalka aan kula jirno Cadowga ku soo duulay dalkeena waan wadaynaa, guul wanaagsana waan ka gaarnay” Xarakada Al- Shabaab.
Nofeembar 28, 2009
Xarakada Al- Shabaab oo dagaal adag kula jirta ciidamada Shisheeye ee jooga Soomaaliya iyo dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay sii wadayaan dagaalada ay uga soo horjedan dawladda Faderaalka KMG ah ee Soomaaliya, oo ay sheegeen in ay ka soo horjeedo Shareecada Islaamka, ayna gadaal ku haysato ciidamado Cadow ku ah Shareecada Islaamka.
Madaxda sare ee Al- Shabaab oo fariin ku aadan Iidul Adxaa udiray Shacabka Soomaaliyeed, ayaa sheegay in ay sii laba jibaarayaan dagaalada ay uga soo horjeedaan dawladda KMG ah oo ay sheegeen in ay ushaqeynayso Reer galbeed, waxa ayna wax laga xumaado ku sifeeyeen talaabooyinkii ay ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKMGS ay madaafiic si arxan daro ah ugu gaaraceen magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya.
Afhayeenka Al- Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere) ayaa sheegay in uusan dagaalkoodu aheyn, mid ay ka leeyihiin ujeedo gaar ah oo aan aheyn in ay sare uqaadaan Shareecada Islaamka iyo ku dhaqankeeda, isagoo beeniyey in ay dagaal kula jiraan Beelo Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in ay Beelaha Soomaaliyeed ka qeybqaateen dagaaladooda oo ay taageersan yihiin, waa sida uu hadalka udhigaye.
Afhayeenkan wuxuu sheegay in ay qaadi doonaan talaabo kasta oo ay cadowga uga saarayaan dalka Soomaaliya, isagoo ula jeeday Madaxda dawladda KMG ah iyo ciidamada AMISOM oo uu ku sifeeyey kuwa dhibaato usoo safriyey Shacabka Soomaaliyeed, isagoo sheegay in masuuliyadaas la weydiin doono Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo uu sheegay in ay isaga ku waardiyaystaan danahooda ay u ilaaliyaan Reer galbeedka.
Xarakada Al- Shabaab ayaa dagaal adag kula jirta ciidamada AMISOM & kuwa dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, waxa ayna horay ugu dagaalameen gudaha Soomaaliya, ciidamadii dawladda Itoobiya ee taageerada wanaagsan siinayay dawladii uu hogaaminayay Md. C/laahi Yuusuf Axmed, balse dawladdaas oo khilaf adag ka bixi weyday iyo dagaaladii oo ku batay ayaa keentay in ay socon waayaan arrimo badan oo ay ku xasilin lahayd dalka Soomaaliya.
Dagaalka cusub ee ay Xarakadan ku dhawaaqday ayaa ah mid ay ku doonayso in ay markale ku hubiso awooda ciidan ee dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, ayagoo bartamihii sannadkan cagaha kor ugu qaaday dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, markii ay qabsadeen inta badan waqooyiga caasumada Soomaaliya, oo ah goobaha ay joogaan taageerayaasha Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Dawladda Soomaaliya ayaa hada maamusho masaafo dhan 3 KM oo ka mid ah caasumada Soomaaliya oo ku fadhida dhul baaxad weyn, isla markaasna inteeda badan ay maamulayaan Xoogaga ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya, kuwas oo hada doonaya in ay sii qabsadaan xarumaha dawladda Soomaaliya iyo masaafada yar ee ay ku fadhido oo kaliya.
Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya C/laahi Yuusuf Axmed oo Munaasabada Ciidul Adxaa awgeed shacka Soomaaliyeed cafis ka dalbaday
Nofeembar 27, 2009
Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya C/laahi Yuusuf Axmed ayaa Munaasabada Ciidul Adxaa awgeed shacka Soomaaliyeed waxaa uu ka dalbaday cafis.
Madaxweynihii hore ee Jamhuuriyada Soomaaliya C/laahi Yuusuf Axmed ayaa isagoo ku sugan dalka Dibadiisa waxa uu u hambalyeeyay Umadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan maalinta Munaasabada Ciidul Adxaa.
Waxa uu ka codsaday guud ahaan Umadda Soomaaliyeed ee kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa ee isaga dhaliilsanayd in ay cafiyaan islamarkaana xalka Soomaaliya ay kawada shaqeeyaan.
Sidoo kale Madaxweynihii hore ee Soomaaliya C/laahi Yuusuf Axmed waxa uu ugu baaqay dhinacyada isaga soo horjeeda Siyaasada dalka Soomaaliya in ay u turaan Shacabkooda islamarkaana xabada ay joojiyaan heshiis dhab ahna ay wada gaaraan.
Hadalkan ka soo yeeray Madaxweyne Yuusuf ayaa imaanaya xilli maanta munaasabada Ciidul Adxaa si wayn looga dabaaldagayo guud ahaan Caasimada Soomaliya ee Muqdisho iyo gobolada dalka.
Madaxweyne Sheekh Shariif oo maanta masuuliyiinta dowladda KMG ku tujiyay Salaada Ciida Masjidka Isbahaysiga Islaamka
Mas’uuliyiinta ugu sar saraysa dowladda KMG Soomaaliya ayaa maanta ka qaybgalay Munaasabad loogu dabaaldagayo Munaasabada Ciidul Adxaa oo ka dhacday Masjidka Isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda KMG Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo salaada Ciidul Adxaa maanta dadka ku tujiyey Masjidka Isbaheysiga halkaas oo ay kasoo qeyb galeen Masuuliyiinta sar sare ee dowladda kuwaaso oo ay kamidka yihiin Madaxweynaha dowladaa KMG Soomaaliya,Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ,xubno ka tirsan golaha waziirada iyo qaar kamid ah Baarlamanka KMG Soomaaliya iyadoo ay ku wehliyeen dadweyne aad u fara badan.
Madaxweyne Sheekh Shariif oo halkaasi qudbad dheer oo dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyey ayaa sheegey in Soomaaliya haatan ay ku sugantahay marxalad adag isagoo sheegey in marxalada adag ay leedahay rag xaliya sidaa darteedna ay lagama maarmaan ay tahay in la helo ragii xalin lahaa oo dalka dhibaatada kasaari lahaa isagoona intaasi raaciyey in Ilaahey ay ka rajeenayaan in Umadda Soomaaliyeed dhibaatada uu kasaaro.
Waxaa kaloo Madaxweynaha qudbadiisa uu ku sheegey in Umad waliba ay leedahay taariikh u gaar ah taariikhda Soomaaliyana aysan abad soo marin waxyaabihii ka dhacey Soomaaliya sanadihii ugu danbeeyey iyadoo uu tilmaayey in Soomaaliya ay horey u soo mareen dagaalo sokeeye kuwaasoo la xaliyey,hasa yeeshee Soomaaliya waligeed aan ka dhicin dagaal Diimed,isagoo sheegay Soomaaliya diinta ay kusoo gaartey ugu yeerista dacwada Islaamka sidaa darteedna hadii ay wax qaldamaan loo baahanyahay in lamaro Diinta islaamka.
Qudbada Madaxweynaha ayaa inteeda badneyd waxaa uu xooga ku saarey arimaha siyaasayada iyo mar xaladaha dalka uu ku suganyahay.
Hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xili maanta qudbado kale oo iyaguna kusaabsan xaalada dalka uu marayo ay si kala gooni gooni ah dadka ay uga jeediyeen mas’uuliyiinta Xoogaga kasoo hor jrrda dowlada KMG Soomaaliya.
Madaxweyne Shariif oo boqolaal ruux maanta salaadii Ciida ku tujiyay Masaajidka Isbaheysiga Islaamka.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta salaadii Ciidul Adxa ku tujiyay boqolaal ruux oo isugu jiray Mas’uuliyiinta Dowladda, Culumaa’udiin iyo dadweyne fara badan oo salaada ku tukaday Masaajidka Isbaheysiga Islaamka.
Ammaanka Masjidka Isbaheysiga Islaamka oo dhowaan dayactir lagu sameeyay ayaa waxaa sugayay Ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa AMISOM, iyadoo qeybaha Masaajidka ay ku gadaamnaayeen Gawaarida qafilan ee Ciidamada AMISOM oo ay ku jireen kuwa dabaabaadka.
Jameecadii ku jirtay Masaajidka oo isugu jiray Mas’uuliyiin, Culumaa’udiin iyo shacabka ayaa waxay ku dhawaaqayeen Takbiirta Salaada Ciida, iyagoo ka muuqatay shacuur ku dheehan farxada ciida.
Masaajidka Isbaheysiga ayaa waxaa goob joog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, Golihiisa Wasiirada, Xildhibaano iyo shacab kale, halkaasoo Madaxweyne Shariif uu ku tujiyay Salaada.
Salaada kadib ayaa Khudbad uu jeediyay Madaxweyne Shariif oo ku baxeysay luqada Carabiga ayaa waxaa uu ugu horeyn kaga hadlay xaalada dalka soomaaliya, waxaana uu Shariifka ku dheeraaday marxaladihii uu Islaamka soo maray iyo Fidnooyinka qaar ee ka jira dalka.
Madaxweyne Shariif ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyed munaasabada Ciida darteed isagoo ugu baaqay ciidan ciideeda kale ay ku gaaraan Nabad bash bash baraare nolo iyo barwaaqo.
Madaxweynaha ayaa ugu duceeyay Umada Soomaaliyed in uu Alle dhibka ka dul qaado, isla markaana colaada iyo mushkiladaha heysata uu Alle ugu badalo Nabad.
Waa markii u horeysay uu Madaxweynaha Salaada Ciida ku tujiyay Masaajidka Isbaheysiga Islaamka Mas’uuliyiin iyo dadweyne fara badan, iyadoo horay Madaxweyne Shariif xilligii uu ahaa Gudoomiyihii Golaha Fulinta Maxaakimta Islaamka uu sidan oo kale salaada ugu tujiyay dadweyne fara badan iyo mas’uuliyiintii Maxaakiimta ee xilligaas, oo ay jaalkiisa ahaayeen Sheekh Xasan Dahir Aweys iyo Dr. Cumar Iimaan Abuubakar.
Madaxweyne Shariif oo Sacuudiga soo gaaray hada
Nofeembar 26, 2009
Madaxweynaha dowladda KMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno wasiiro ah iyo Xildhibaano, safarka Madaxweynaha ayaa sida aanu wararka Sacuudiga ay sheegayaan in uu Shariif halkaani usoo gaaray si uu u guto xajka isagoo isbuuc halkaasi ku sugnaan doono.
Madaxweynaha ayaa la filayaa sidoo kale inuu kulan gaaban la qaato boqortooyada Sacuudiga iyagoo halkaasi kaga wada hadli doona dalab ay horay wadamada IGAD Sacuudiga uga codsadeen in ay qeyb ka baxshaan lacagta ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga.
Safarka Madaxweyne Shariif ee uu galabta kaga dhoofay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa la arag wax madaafiica oo lagu weeraray iyadoo ay horey u dhici jirtay in hoobiyeyaal lagu tuuro kadibna jawaabta ka imaata ay noqon jirtay mid dhibaato u keenta shacabka Muqdisho.
Guddoomiye ku xigeenka Ururka Xisbul Islaam Sheekh Xasan Turki oo la filayo inuu tago Magaalada Kismaayo si uu heshiis ula gaaro Al-Shabaab
Sheekh Xasan C/llaahi Xirsi (Xasan Turki) oo ka mid ah Saraakiisha Xisbul Islaam ayaa la sheegayaa inuu dhawaan tagayo magaalada Kismaayo si uu heshiis ula gaaro Ururka al-Shabaab oo ay ku dagaalameen gobolka Jubadda Hoose.
Guddoomiye ku xigeenka Ururka Xisbul Islaam Sheekh Xasan Turki oo ka mid ahaa mas’uuliyiintii qeybta ka ahaa dagaalladii ka dhacay Magaalada Kismaayo bishii Octobar 1-deedii ee u dhexeeyay Al-shabaab iyo Xibsul Islaam ayaa la sheegayaa inuu hordhigi doono Al-Shabaab qodobo dhowr ah.
Saraakiisha ku dhow Sheekh Xasan Turki ayaa sheegay inuu la kulmi doono mas’uuliyiinta Al-shabaab ee Jubbooyinka, si ay uga heshiiyaan dagaaladii ka dhacay Jubadda Hoose oo ay Al-Shabaab guulaha ku gaareen.
Sheekh Xasan Daahir ayaa laga yaabo inuu ka qaybgalo shirkaas oo noqon doona mid ay labadan urur ee xulufada ah heshiis kaga gaaraan dagaalladii dhexmaray oo ahaa kuwo geystay khasaare aad u fara badan.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa doonaysa in Xisbuil Islaam ay ka mid noqoto Al-Shabaab, waxaana la ogayn waxaana la kala ogaan doonaa arrimo faro badan hadiiba uu dhaco kulankaasi lagu heshiisiinaayo labadii dhinac ee ku dagaalamay Goboalada Jubooyinka.
Mareykanka oo Madaxweyne Shariif ogoleeysiiyay in xilka laga qaado Shariif Sakiin
Xukumadda Washington ayaa Madaxweyne Shariif Sheekh Ahmed ogoleeysiisay inuu saxiixo xilka qaadis lagu sameeyo Ra’isulwasaarre ku xigeenka Somalia ahna Wasiirka Maaliyadda Mr Shariif Xasan Sheekh Adan,
Diblomaasiyiinta Mareykanka waxay Madaxweyne Shariif ka codsadeen inuu saaxiibkiis Shariif Sakiin ka dhigo Safiirka Somalia u fadhiya Saudi Arabia,sida ay Waajidpress ugu xog warameen ila wareedyo muhiima.
Xilka qaadista lagu sameeynaa Shariif Sakiin ayaa sabab looga dhigay isagoo lunsaday hantidii Qaranka ee sida sharcigaa loo marsiiyay Wasaaradiisa,waxayna beesha Caalamka u aragtay nin iskala weyn sharciga iyo cadaalada,uguna shaqeeysanaa magaca Dowladda sida NGO .
Wasiiro uu ka mid yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan hadii xilka qaadis lagu sameeyo waxaa laga yaabaa in isbedel ay ku tilaabsato Dowladda hasse yeeshee waxaan la ogeyn daacadnimada Madaxweyne Shariif ee ku saleeysan in la wiiqo awooda Shariif Sakiin uu si ka baxsan sharciga ugu maamulanaa xafiisyada Qaranka Somalia.
Muqdisho: Dawladda KMG ah oo eedaysay dawladda Kenya, ka dib Iibshadii Hantida ay leedahay Umada Soomaaliyeed
Dawladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa ku eedaysay dawladda Kenya in ay dayacday xaalada Hantidii Umada Soomaaliyeed ee dalkaasi Kenya, gar ahaana dhismihii Safaarada Soomaalida ee magaalada Nayroobi, kaasoo ay iibsadeen Labo qof oo mudo ku doodaya Lahaanshaha Safaarada Soomaalida ee dalka Kenya.
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay in uusan dhismaha Safaarada Soomaalida ee magaalada Nayroobi, uusan marnaba muran gali Karin, ayadoo sheegtay in ay dawladda Kenya wax ka qaban weyday arrimahaasi, waxa ayna ku baaqday in aysan dawladda Kenya indhaha iska tirin oo ay qaado talaabooyinka looga baahan yahay.
Wasiirka arrimaha dibada ee dalka Soomaaliya Cali Axmad Jaamac (Jangali) ayaa sheegay in aad uga xun yahay arrinta iibsiga Safaaradii Soomaalida ee dalka Kenya, isagoo sheegay in ay dawladda Kenya ka war-wareegayso talaabo ka qaadida shaqsiyaadka Iibsaday dhismihii Soomaalida ee magaalada Nayroobi ee wadanka Kenya.
Wasiirka arrimaha dibada ayaa sheegay in wax badan lagala hadlay dawladda Kenya arrimaha ku wajahan Safaarada Soomaalida, isagoo wax laga xumaado ku sifeeyey in la xiro waayo dadka eedaysan ee uu ka mid yahay Salmaan ninka la yiraahdo oo hada jooga dalka Ingiriiska, kuna haysata Magan-galyo Siyaasadeed.
Aduun gaaraya 28.5 Milyan oo dolar ayaa lugu iibsaday dhismahan, waxaana iibsaday labo qof oo lakala yiraahdo Sulaymaan Raxmatulaahi Oomar iyo Sariina Sulaymaan Raxmatulaahi, waxa ayna sheegayaan oo ay ku dacwinayaan in ay leeyihiin dhismihii Safaarada Soomaalida ee dalka Kenya.
Maxkamada dalka Kenya ayaa marar badan la horgeeyey kiiska Iibsiga Safaaradii Soomaalida, balse Maxkamada ayaa wax go’aad cad ah ka qaadan weyday arrintaasi, ayadoo dawladdii uu hogaaminayay Madaxweyne Yuusuf ay bixisay lacag fara badan oo ay xukuntay Maxkamadu in la keeno si kiiskaas markale loo furo, waxaana hada la raadinayaa sidii ay maxkamad Kenya go’aan kama dambeys ah uga qaadan lahayd arrimahan.
Hanti iyo Burburkii dawladdii Maxamed Siyaad Barre, qaar ka mid ah Shaqsiyaadkii gacanta ku hayay hantidii Umada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibada ayaa bilaabay boob iyo dhac ay iskugu dareen dhismayaashii iyo lacagihii ay hayeen intaba, ayagoo is leh in aysan marnaba dawlad ka dhaleyn dalka Soomaaliya, balse hadii ay dawladda awood leh ka hirgasho Soomaaliya Maxkamad ayaa sugaysa.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Nofeembar, 2009.